ग्राण्डीको निरन्तर लापरबाही. ‘सकुशल’ बच्चाको उपचारकै क्रममा मृत्यु « Pahilo News
प्रकाशित मिति :7August, 2019 7:21 am
गलत अस्पताल छनोट गरेका कारण मैले बच्चा गुमाएँ । ग्राण्डी अस्पतालले सञ्जीव न्यौपानेको बच्चाको उपचारमा लापर्बाही गरेको थाहा हुँदाहुँदै म यहाँ आउनै नहुने । श्रीमती निशाले त भनेकी पनि थिइन्, तर मैले नै मानिनँ, सधैं त्यस्तो हुँदैन भनें । अहिले १८ दिनकी छोरीको कलिलो अनुहारले मलाई लखेटिरहेको छ ।
(दोर्जे लामासँग भगवती तिमिल्सिनाले गरेको वार्तामा आधारित)
काउन्सिलले आजै छानबिन गर्ने
ग्राण्डी अस्पतालले प्रहरी प्रशासन तथा पीडित परिवारसँग लापर्बाही भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिलले आजैबाट छानबिन सुरु गर्ने भएको छ । नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिंदै प्रवक्ता डा. ढुण्डी पौडेलले भन्नुभयो, हामी ग्राण्डी जान्छौं, सम्बद्ध डाक्टर र नर्स तथा प्रशासकलाई भेट्छौं, आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघिबढाउँछौं ।
यसैबीच ग्राण्डी अस्पतालका निर्देशक डा.चक्रराज पाण्डेलाई पटक–पटक मोबाइलमा फोन गर्दा रिसिभ भएन । पछि ल्याण्ड लाइनमा फोन गर्दा रिसेप्सनबाट नर्सिङ स्टेशनमा दिइयो, तर विषय बताएपछि ‘उहाँ बिजी हुनुभएकाले फोन दिन मिल्दैन, एकछिनपछि कल गर्नुस्’ भनियो । मंगलबार बारम्बार प्रयास गरियो, तर डा. पाण्डे बोल्च चाहनुभएन ।
महाराजगञ्ज पुलिस कार्यालयका अनुसार यही साउन ६ गते मृत्यु भएको शिशुको लाश अझै उठेको छैन । अस्पताल पिडितपक्षसँग आन्तरिक छलफलबाटै मुद्दा टुग्याउने पक्षमा देखिन्छ । पीडित पक्षले मौखिक रुपमा न्यायको माग गरेको छ र अस्पतालको तर्फबाट मौखिक रुपमै शान्ति–सुरक्षाको माग भएको छ । प्रहरी शान्तिपूर्ण रुपमा समस्या समाधानको प्रयासमा छ ।